Xukun xiiso aan u qabo uma soo laabane, xilka baan iska ridayaa! Q1AAD | Laashin iyo Hal-abuur
“Inaan NABI noqdo ayaan ku sigtay!” Isagoo ka raadraacayain Nebiga keliya loo waxyoodo. Misna wuxuu yiri:
“War maxaa ku helay, oo aad ugu socotay, sidii gabar la guday ama awr baxsi badan, oo la qabbirey?!” Guuleed, oo ewelba xalay xilli dambe seexday, haddana, aan hurdo fiican seexan, iminkana, ay gaajo hayso, walaacna ku abuuran yahay, ayaa isaga oon u warcelin odaygii ka hinqaday meeshii uu fariistay. Markii uu sii istaagayey, ayaa waxaa garabka ka qabtay Aw Raage, oo ku yiri: